Col. Mudan ?Dhimashada 8-deed ruux oo 3 ciidan tahay ayaa qaraxu sababay 37-na waa dhaawac? – Radio Daljir
Diseembar 5, 2013 4:30 b 0
Boosaaso, December 5, 2013 – Dowladda Puntland ayaa ka hadashay mar kale weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo mareyey bartamaha Boosaaso, weerarkaas oo sababay khasaare badan.
Wasiirka amniga iyo DDR-ta ee Puntland Col. Khaliif ciise mudan oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in weerarku khasaare badan dhaliyey oo ay ku dhinteen 8 ruux oo uu ku jiro qofkii ismiidaamiyey, Col. Mudan ayaa xusay in saddex askari ay ku jiraan dadka dhintay.
?Al-shabaab ayaa is qarxiya iyaga ayaa ka dambeeyey weerarkan, waan baaraynaa dadkii ka dambeeyey waana soo qabannaynaa sidaan u soo qabanay kuwii hore ee amniga wax yeelay.? Ayuu yiri Col. Mudan
Wasiirka ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay si buuxda ula wareegeen goobtii uu qaraxu ka dhacay maanta, taas oo uu ku tilmaamay guul wayn oo u soo hoyatay shacabka maadama aysan dhibaato kale dhicin.
Wasaaradda amniga ee Puntland ayaa xaqiijisay dhimashada toddobo ruux iyo qofkii is-qarxiyey, sidoo kale waxay shaacisay dhaawaca 37 ruux oo rayid iyo ciidan isugu jira, in kastoo aan si buuxda loo kala saarin.
Madaxweynaha Jubba oo ku amray ciidamada maamulka in ay tagaan goobo loo cayimay